Enclosure & Docking Station – ICT.com.mm
ORICO 2.5 inch USB3.0 Hard Drive Enclosure (Blue)K25,000
ORICO 2.5 inch USB3.0 Hard Drive Enclosure (Black)K25,000
SSK HDD External Enclosure HE-V600K25,000
UNITEK S1204B Solid Force NVMe/SATA Enclosure LiteK88,000
j5create JEE256 USB-C to M.2 NVMe SSD EnclosureK65,537
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: ORICO 2588US3 Compatible HDD Type: 2.5 inch HDD / SSD (7mm & 9.5mm) Output Interface: SuperSpeed USB3.0 HDD Interface: SATA I,II,III Data Cable: 0.6M USB3.0 Cord...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Great Compatibility: Works great with Windows,MAC OS,Linux full range system, specially designed for 2.5 inch SATA HDD and SSD up to 10TB maximum with the thickness of...
UNITEK S1204B Solid Force NVMe/SATA Enclosure Lite
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Supports USB3.1 Gen2 10Gbps data transfer speed. Capable of 2x 8GT/s high-performance SSD, either PCIe Gen3x2 NVMe M.2 SSD or SATA6Gbps AHCI M.2 SSD in 42mm/60mm/80mm. Support...
Interface: USB-C™ female: USB-C™ 3.1 Gen 2, 10 Gbps M.2 PCIe NVMe SSD: Supports 2230, 2242, 2260 and 2280 Blue LED: Constant light - device connection, Flashing - data transmission...
UNITEK USB3.1(Gen2) to SATA6G 2.5"/3.5" Dual Bay Aluminium Docking Station
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: Y-3027 Brand: UNITEK Upstream: USB Type-C Female Downstream:2x SATA Interface Power: 12V, 3A DC Dimension: 5.5 x 2.5mm Cable: 1.2M, USB-A Male to USB-C...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: Y-3365 Brand: UNITEK Upstream: USB-C Male Downstream: M.2 (Female) Cable Length: 15 cm Product Dimension: 105mm x 40mm x 9mm Color: Gray Features: Compact aluminium...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: Y-3371 Brand: UNITEK Upstream: 1 x USB3.1 USB-C (Female) Downstream:2x SATA (Female) DC Dimension: Micro USB Data Cable: 1M, USB3.1 USB-A (Male) to USB-C...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Compatible HDD Type: 2.5 & 3.5 inch HDD /SSD Output Interface: SuperSpeed USB3.0 HDD Interface: SATA I,II,III Data Cable: 1M USB3.0 Cord Power Supply: 12V2A Power Adapter...